ဒူဒူကြီး: သဘေ်ာက Electric Motor Starter များ - အပိုင်း (၂)
ဒူဒူ တယောက်အလုပ်များနေလို့ ဒူဒူ့ ကိုယ်စားဝင်ရေးလိုက်ပါဦးမယ်။ ဒူဒူ့ မမ မစံပယ် ပြင်ပေးထားလို့ ဒူဒူ့ Blog ကလေးသားနားနေတာကို၊ သဘောကျမိသလို ညီမ မစံပယ် ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒူဒူရေးခဲ့တဲ့ သဘေ်ာက Electric Motor Starter များ - အပိုင်း (၁) ကို၊ ဒီနေရာမှာ ပြန်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Star Delta Starter တွေနဲ့ Auto Transformer Starter တွေမှာ၊ ပျက်စီးချို့ယွင်းမှုအများဆုံး ဖြစ်ပေါါ တတ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းကတော့ Timer တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Timer ဟာ Staring Condition ကနေ Running Condition ကို၊ ကူးပြောင်းပေးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Timer တွေကို အလွယ်တကူ အသစ် လဲလှယ်လို့ ရအောင် Spare အပိုဆောင်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။
Fig. Magnetic contactor and contact points
ဒါ့အပြင် Star Delta Starter တွေနဲ့ Auto Transformer Starter တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ Main Magnetic Contactor တွေကို၊ အချိန်အပိုင်းအခြား ကာလတခုသတ်မှတ်ပြီး၊ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှု Regular Maintenance ကိုဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်။ အသုံးပြုထားတဲ့ Main Magnetic Contactor တွေဟာ၊ အရွယ်အစား ကြီးမားတာမို့ အပေါါအဖုံးကို ဖွင့်ကာ Movable Contact Element ကိုဖြုတ်ထုတ်ပြီး၊ Movable Contact Point တွေနဲ့ Stationary Contact Point တွေကို၊ သန့်ရှင်းပေးခြင်းဖြင့်၊ Regular Maintenance ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထိလိုက်၊ ကွာလိုက်နဲ့ လျှပ်စီးကြောင်း Current ဖြတ်စီးပြီး ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှ Arcing Current Effect ကြောင့် Contact Point တွေရဲ့မျက်နှာပြင်တွေမှာ Pitting အချိုင့်များဖြစ်ပေါါ ခြင်း၊ စားသွားခြင်း၊ ပဲ့သွားခြင်း အစရှိတဲ့ မျက်နှာပြင် မညီညာမှုတွေဖြစ်ပေါါစေတတ်သလို၊ Oxide ချိုး အညစ် အကြေးများကပ်ခြင်း တွေလည်းဖြစ်ပေါါလာတတ်ပါတယ်။ Contact Point တွေမျက်နှာပြင် မညီညာမှုက တဆင့် Magnetic Contactor ရဲ့ Coil ဟာ အလုပ်လုပ်ပေမယ့်၊ Phase Failure ဖြစ်ကာ Motor ကို ပါမောင်းနှင်လို့ မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေကြုံနိုင်သလို၊ Phase Failure ဖြစ်ပေမယ့် Thermal Over Load Relay က၊ အလုပ်မလုပ်တဲ့အခါ၊ Motor burnt out လောင်ကျွမ်းသွားပါတယ်။
Fig. Wound rotor induction motor
Rotor Resistance Starting Method ကို Asynchronous Motors အုပ်စုမှ Induction Motor တမျိုး ဖြစ်တဲ့ Wound Rotor Induction Motor တွေကိုနှိုးတဲ့အခါအသုံးပြုပါတယ်။ Wound Rotor Induction Motor ရဲ့ Stator တည်ဆောက်ပုံဟာ၊ Squirrel Cage Induction Motor နဲ့အတူတူဖြစ်ပြီး၊ Rotor မှာ Generator တွေလို၊3Phase Double Layer Winding ကိုထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ Rotor Windings တွေကို Rotor Shaft ပေါါမှာထိုင်ထားတဲ့ Slip Rings တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။
သဘေ်ာတွေမှာ Starting Torque များများလိုတဲ့ Bow Thruster တွေနဲ့ Tanker တွေမှာဆိုရင် Cargo Pump တွေကိုမောင်းနှင်ဖို့ Wound Rotor Induction Motor တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ တခါတရံမှာ Wound Rotor Induction Motor တွေကို၊ Slip Ring Induction Motor တွေလို့လဲ ခေါါပါတယ်။
Fig. Typical torque speed curve for3phase induction motor
Torque ( T) = Motor Slip ( S ) / Rotor Resistance ( R )
ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းအရ Rotor Resistance နည်းရင် Rotor Current ကိုမြင့်မားစေပါတယ်။ Rotor Current မြင့်မားမှုဟာ Starting Torque ကိုကျဆင်းစေသလို စတင်လည်ပတ်စဉ်မှာဖြစ်ပေါါလာမယ့် Motor ရဲ့ Slip ကိုလည်းကျစေပါတယ်။ Rotor Resistance များတဲ့အခါ Rotor Current ကျဆင်းသွားပြီး၊ Slip ကို လည်း မြင့်မားစေတာကြောင့် RPM အနည်းငယ်နဲ့ စတင်လည်ပတ်စဉ်မှာ Pull Out Torque ဆိုတဲ့ ရုန်းအားကို အများဆုံးရရှိနိုင်ပါတယ်။
Squirrel Cage Induction Motor တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ၊ Wound Rotor Induction Motor တွေ ဟာ၊ Speed Control လုပ်နိုင်ခြင်း၊ Starting Torque ကို Full Load Torque ထက် (၂) ဆမှ (၂) ဆခွဲ ခန့် ရနိုင်ခြင်းနဲ့ Starting Current ဟာ Full Load Current ထက် (၂) ဆခွဲမှ (၃) ဆခွဲလောက်သာ အသုံးပြုခြင်းတို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ Wound Rotor Induction Motor တွေကိုစတင်နှိုးတဲ့နည်းကို၊ Rotor Resistance Starting Method သို့မဟုတ် Secondary resistors (or rheostat) Starting Method လို့ လည်းခေါါကြပါသေးတယ်။
Fig. Rotor resistance starter
စနှိုးအချိန်မှာ၊ Stator Coil ကို၊ Supply Voltage အပြည့်ပေးသွင်းပြီး၊ Rotor Coil ကိုတော့အပြင်ကနေ Resistor သို့မဟုတ် Rheostat တွေသုံးကာ၊ Carbon Brushes တွေနဲ့ Slip Rings တွေမှတဆင့် Resistance ကိုပေးသွင်းပါတယ်။ အသုံးပြုထားတဲ့ Resistor တွေကတော့ Wire-wound Type Resistor တွေဖြစ်ပါတယ်။ စတင်လည်ပတ်ပြီး၊ Rated RPM ကိုရောက်သွားစဉ်မှာတော့ ပေးသွင်းထားတဲ့ Resistance ကို Timer နဲ့ Magnetic Contactor တွေမှတဆင့် ဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။
Wound Rotor Induction Motor ရဲ့ Speed ကို လိုအပ်သလို အတိုးအလျှော့လုပ်ဖို့အတွက် ၁။ Rotor Rheostat Control Method ၂။ Cascade Control Method ၃။ Rotor Circuit EMF Injection Method ၄။ Kramer System Method နဲ့  ၅။ Scherbius System Method တို့ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
သဘေ်ာက Starter တွေမှာသုံးတဲ့ Timer တွေကို၊ ခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ အသုံးပြုပုံကို မူတည်လို့၊ On-delay Operation (Time Delay Operation) Timer, Off-delay Operation (Time Delay Resetting) Timer, Flicker Operation Timer, Interval Operation Timer နဲ့ Star /Delta Operation Timer ဆိုပြီး၊ တွေ့ရ ပါတယ်။
Fig. On delay timer
ON Delay Timer ဆိုတာကတော့ Timer Energized ဖြစ်နေစဉ် အတွင်း၊ တနည်းအားဖြင့် Timer On နေစဉ်အတွင်းမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့၊ Timer ဖြစ်ပါတယ်။ Timer ရဲ့ Output ကနေ On သို့မဟုတ် Off Contact Function ကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Fig. Off delay timer
Off Delay Timerကတော့ Timer Energized ဖြစ်နေစဉ်၊ တနည်းအားဖြင့် Timer On နေစဉ်အတွင်းမှာ အလုပ်လုပ်သလို၊ Timer ကိုပေးထားတဲ့ Power Supply ကိုရပ်လိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း၊ အလုပ် လုပ်တဲ့ Timer ဖြစ်ပါတယ်။ Timer ရဲ့ Output ကနေ On သို့မဟုတ် Off Contact Function ကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
ဥပမာ ကားတံခါးကို၊ ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၊ Door Switch ကတဆင့် Timer ကို၊ Activated ဖြစ်စေပြီး၊ ကားရဲ့ အတွင်းခန်းမီးကို လင်းစေပါတယ်။ ကားတံခါးကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါ Door Switch ကနေတဆင့် Timer ကို၊ ပေးထားတဲ့ Power Supply ကိုဖြတ်လိုက်ပေမယ့်အတွင်းခန်း မီး ဟာ အချိန်အတိုင်းအတာ တခုအထိ ဆက်လင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Flicker operation timer
Flicker Operation Timer ကတော့ Timer Energized ဖြစ်နေစဉ် အတွင်းမှာ၊ သတ်မှတ်ချိန်ညှိပေးထား တဲ့ Time Setting အတိုင်း၊ On နဲ့ Off Contact Function ကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အလွယ်တကူ ဥပမာပေးရရင် Water Fountain ရေပန်း တွေမှာ၊ ရေတွေကို ပန်းထုတ်လိုက်၊ ရပ်လိုက်ဖြစ်နေအောင် Flicker Operation Timer တွေကိုသုံးကြပါတယ်။
Fig. Interval operation timer
Interval Operation Timer ကတော့ Timer Energized ဖြစ်အောင် Power Supply ပေးပြီး၊ Supply ကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပေမယ့် Timer ရဲ့ Output ကနေ On သို့မဟုတ် Off Contact Function ကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ကလေးတွေ အကြွေထည့်ပြီး၊ စီးတဲ့ အရုပ်တွေကို၊ ဥပမာပေးချင်ပါတယ်။ အကြွေစေ့ ဝင်လာတဲ့အခါ၊ Limit Switch မှတဆင့် Timer ကို၊ Activated ဖြစ်စေပြီး၊ အချိန်အတိုင်းအတာ တခုအတွင်းအရုပ်လှုပ်ရှားနေအောင် Interval Operation Timer တွေကိုသုံးကြပါတယ်။
Fig. Star /Delta operation timer
Star /Delta Operation Timer တွေကတော့ မော်တာကို စနှိုးတဲ့အခါ၊ Timer Energized ဖြစ်ပြီး၊ Star Connection နဲ့ စတင်လည်ပတ်စေဖို့ Star contactor တွေကိုအလုပ်လုပ်စေပြီး၊ Rated RPM သို့ရောက် ခါနီးမှာ Delta contactor တွေကိုပြောင်းလဲ အလုပ်လုပ်စေတဲ့ Timer အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Timer တွေဟာ၊ သဘေ်ာတွေမှာသုံးလေ့ရှိတဲ့ SSR - Solid State Relay Timer တွေဖြစ်ပါတယ်။ SSR တွေထဲမှာ Power transistor တွေ၊ SCR - Silicon Controlled Rectifier တွေ ဒါမှမဟုတ် TRIAC - Triode for Alternating Current တွေကိုသုံးထားပါတယ်။
Fig. Hybrid type
Fig. Transformed-coupled type
Fig. Photo-coupled type
Solid State Relay အမျိုးအစား Timer တွေကို၊ Hybrid Type, Transformed-coupled Type နဲ့ Photo-coupled Type ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Fig. Soft starter
နောက်ပိုင်းမှာတော့ Starter တွေအလုပ်လုပ်စေဖို့၊ အခြေခံလေးတွေကို သိထားတာနဲ့ PLC ဆိုတဲ့ Programmable Logic Controller တွေကို စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲတတ်ဆင်အသုံးပြုလာပြီး၊ Main Magnetic Contactor တွေကလွဲလို့၊ ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများကို PLC Unit တွေနဲ့ အစားထိုးလာ ကြပါတယ်။ အဲဒီလို မော်တာအကြီးကြီးတွေကို PLC Unit တွေနဲ့ ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်တဲ့ Starter တွေကို Soft Starter တွေလို့ခေါါပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 05:17